🥇 ▷ Apple Waxaad horay u haysataa rukhsad si aad u isticmaasho tamar qorraxda iPhone ✅
Apple Waxaad horay u haysataa rukhsad si aad u isticmaasho tamar qorraxda iPhone
Adeegsiga tamarta cadceedda on iPhone, u dhowdahay inuu noqdo mid run ah
Patent kale? Haa, wararka maalmihii ugu dambeeyay iyo usbuucyadiiba, Apple dhexdeeda, gaar ahaan tarjumaadda rukhsadaha. Laakiin ha quusan, sababta oo ah taasi waxay muujineysaa in waqti dhow ama kuwa dambe ee Cupertino ay naga yaabin doonaan teknoolojiyad cusub iyo nidaamyo aan illaa iyo hadda la aqoon. Kuma yaa ku dhaca inuu hubiyo in mid ka mid ahi uusan si gaar ah ula xiriirin isticmaalka tamarta qorraxda ee iPhonekeena soo socda, sida xaaladdan oo kale ah.
Aaladda patent cusub ee Apple ayaa qeexeysa adeegsiga iftiinka qoraxda ee iPhone-ka
Gaar ahaan, wax walbaa waxay ka soo baxayaan liqitaan dad ah oo ka socda AppleInsider, kuwaas oo tilmaamaya in Apple He uu hadda gudbiyay rukhsad ay ku muujinayaan aqoonta caqliga ee habka cusub ee loogu talagalay ku biirista mashiinnada cadceedda hore loo yaqaan ee lakabka sare ee aaladaha mobilada. Guddiyadan ayaa xitaa yeelan kara badhamooyin xasaasi ah, waxayna qayb ka noqon kartaa nooc shaashad dabacsan oo si gaar ah loogu talagalay tan.
Baadhitaan aan annagu hilmaami karin, ayaa ah in dad badani aysan ogayn in tani dhab ahaantii aysan ahayn patentkii ugu horreeyay ee la xidhiidha tamarta qorraxda ee leh Apple, laakiin kan labaad. Waxa dhaca ayaa ah in tani ay ahayd qaybtii ugu horreysay ee nidaamkan cusub, kaas oo ka duwan xaqiiqda ah in ay ka kooban tahay la sifeeyay, oo u adeegi doonta xarumo dheeri ah maxaa yeelay waxay ku dhex wareegi doontaa aag yar oo ku yaal dhulkii hore u xaddidanaa oo ay telefonada casriga ahi hadda haystaan.
Ku dallacsiinta iftiinka qorraxda ee iPhone-ka ayaa adeegsan doonta tikniyoolajiyad u horseedi doonta suuqa
In kasta oo aynan wali caddayn sida Apple ugu talagashay in ay u adeegsato tamarta qorraxda ee marinnada ku xigga, mid ka mid ah wararka xanta ah ee ugu waaweyn ayaa tilmaamaya in dhab ahaantii ay ku yaalaan gadaal moobiilka. Mid ayaa la yaabi doona sida ay suurtagal u tahay markaa in lagu helo iftiinka qoraxda haddii shaashadda taabashada ay dhinaca kale tahay. Iyo jawaabta Apple ee arrintan ku saabsan wuxuu ka hadlayaa tikniyoolajiyad cusub oo soo baxday.
Gaar ahaan, soosaarayaasha Cupertino waxay adeegsan lahaayeen aalad gudaha ah oo u oggolaaneysa marinnada iftiinka qorraxdu si toos ah u siineyso hore ee moobaylka, si nalka loo gudbiyo qeybta dambe. Tan darteed, godad iyo dekedo ayaa loo adeegsan lahaa fududeynta gelitaanka iftiinka qorraxda, iyo isticmaalka buuxa ee shucaaca qoraxda.
IPhone 6 oo wata koronto isku mid ah?
Apple Wuxuu soo bandhigay labadaba waqtiyadii hore iyo maantaba inuu danaynayo inuu isticmaalo tamarta qoraxda si uu ugu adeego xukunka qaar ka mid ah aaladihiisa, in kabadan mar wuxuu soo qaatay suurtagalnimada in iPhone 6 uu ku soo oogi karo iyada oo loo adeegsanayo qalabka ku shaqeeya tamarta qoraxda, waxay u muuqataa wax aan macquul aheyn in la dhaliyo dhammaan tamarta lagama maarmaanka u ah in lagu dallaco batteriga mashiinnadaas qorraxda, waxaan meesha ka saari karnaa in dhowaan wax soo saar ay wataan macruufka (iPhone, iPad) ay ku daraan lacag isku-dhafan, koronto iyo qorrax labadaba.